Kuze ingane waqala ukunyakaza, lo okhulelwe umama, ikakhulukazi eziveza a yakhe yokuqala ingane, azinakho fully aware of BABE isimangaliso kwenzekani kuye umzimba. sokukhulelwa Okwesibili ngokuvamile ubabonisa ngaphezulu ngamabomu. Owesifazane ukulalela okwengeziwe enganeni yakho, akusiyo kuphela unesithakazelo emizweni yabo siqu mayelana nokuzalwa kwengane, kodwa sinazo - njengoba ebona ukubukeka kwakhe kuleli zwe.
Mhlawumbe bonke bezibuza ukuthi ingane eba esibelethweni. amasonto 40 Nje - futhi ukukhanya kukhona isimangaliso encane, umuntu nazo zonke izinzwa. Kepha lafunda ukuzisebenzisa akuyona ekuzalweni, futhi isikhathi eside phambi kwakhe. Ngiqinisekile eziningi abesifazane abakhulelwe baye baphawula ubuhlobo umculo ingane eziphatha ngayo. Ngaphansi yonke zabuna, ngaphandle kokukhetha, ngehlise umoya. umculo Heavy futhi elikhulu, kunalokho, kubangela umsebenzi owengeziwe. Kid ukhahlela esiswini, okubonisa akajabule ngathi.
Ukuphila ingane esibelethweni - kungcono umjaho yangempela ekuphileni. Kusukela esitokisini esincane kudingeka akhule abe umzimba eziyinkimbinkimbi. Uyabuzwa, lezwa uyaqonda konke ukuthi kwenzekani endaweni emzungezile, kancane kancane abaqeqeshiwe futhi ukulungele ukuqala ukwazi izwe elikhulu. Umama umsebenzi kulesi sigaba - kumbukiso ukuthi yethu emhlabeni okungukuthi ebheke futhi ezithakazelisayo, futhi okungukuthi bedingeka futhi bethandwa.
Lapho zonke iqala
Lokho iqanda elilodwa okukhulile wahlangana isidoda. Uhambo luqala e-tube fallopian, okuyinto kuthatha cishe 5 izinsuku. Ekupheleni kwaleyo nkathi, i-embryo ibizwa Wawufaka kwesibeletho. Benziwa ubuchopho kulesigaba Lesiphakeme.
Umbungu: 5 kuya ku-8 ngesonto
isibindi Kwakheka, inhliziyo (kakade iqala ukushaya uma sebehlanganisa amasonto angu-6), wokugaya ukudla bese izinhlelo zokuphefumula. Kuyinto kulesigaba kubeka umehluko ngokobulili. Futhi kubaluleke kakhulu kule nkathi kumiswa isimiso sezinzwa esiyinhloko (neural tube uvala yonke indlela ukuba kwesonto lesishiyagalombili). Kid ukhulile, yayo ukuphakama -. 2 cm Isisindo ingane esibelethweni luyokhula ngokushesha, kulesigaba, uneminyaka engu-3
Izithelo: kusukela 9 kuya ku-12 ngesonto
kuphela ngenyanga yesithathu yokukhulelwa, ngokuvamile kungabonakali isikhundla "ezithakazelisayo" of umama okhulelwe nengane kobuchopho yathuthuka kangangokuba amaseli ayo ukukhiqiza pulses (amasignali zomzimba). Ngu ngesonto 12, ngikwandise kakhulu inani izinzwa. Kukhona cerebellum, obangela nokudidiyela ukunyakaza. Njengoba ingane eba esibelethweni ngokukhulu ukushesha, isivele ikhanda ngokucacile akachazeki, esifubeni kanye nasemilenzeni. Baby imayelana 4 cm ubude nesisindo mayelana '45
Umcimbi enkulu yalesi sinyathelo kungenziwa ngokuthi ukubukeka lokuqala elisheshayo. Uyakwazi ungatshekisa ikhanda lakho, uma sithinte umlomo wakhe noma ikhala. Dweba emuva isandla futhi wenze ukunyakaza kunezinxushunxushu ngaphezulu ukuziqonda. umqondo athuthukisiwe touch, ingane iqala ukuzizwa touch of bonke ubuso umzimba nabo odongeni kwesibeletho. Ngakho uzizwa nomntwana esizalweni zonke touch kusukela ngaphandle, kuwukuziphulula esiswini ukuze sikhuthaze ukuthuthukiswa futhi unike ingane nokuba iqonde ukuthi nguye okuthandayo.
Le nkathi libhekene okusheshayo ngokomzimba ukukhula nezingokwengqondo ukuthuthukiswa. Uma ingane 13 ngesonto ifinyelela 7 cm 16 th ukukhuphuka 12 cm. Isisindo is anda ngokushesha, okwandisa kusuka 80 kuya 110 g kwenzeka iphuzu turning, ingane iqala ukushaya futhi sakwazi ukuphefumula, kuyilapho abancela emoyeni esikhundleni-amniotic fluid. Kanyekanye kwakhiwa ukunambitheka efihlekile. Kid uzama futhi ihlaziya yamanzi. Mangisho, ukunambitheka zokugcina sixhomeke kakhulu yokuthi unina badla.
Namuhla, i-ultrasound kuyasiza ukulunguza njengoba ingane eba esibelethweni. It may wince nokubukeka kude uma kugwinywe amanzi nge okumunyu ukunambitheka, futhi, Ngakolunye uhlangothi, ukuba express injabulo, njengoba equkethe omningi. Nambithani izintandokazi abekwa manje, ngakho watch ekudleni kwakho. Amaswidi ngaphandle izinyathelo okungadingeka ukwenza senze. Ingane kukho konke ukuphila bekungeke ulwa izifiso lezi ukudla okungenamsoco. Ukudla okunempilo kufanele fed kulesigaba, kunokuba kabuhlungu accustom ingane kuye ngaleso sikhathi.
Ngu kwamasonto angu-16, omama ngokuvamile ziqale sengathi ezihambayo kid. Lokhu lula kuchumanisa kanye nekucondzisa ukunyakazisa ingane, kanye isisindo sayo owengeziwe.
Okwesihlanu ngenyanga: kusuka 17 kuya ku-20 amasonto
Ngu ekuqaleni kwalesi sikhathi, kwezitho zangaphakathi engimbumbile kakade. Bayoqhubeka ngcono yabo kwaze kwaba yilapho kuvela ukukhanya, kodwa iyahola ukuthuthukiswa ngokwengqondo. Kid selikhule-24 cm nesisindo mayelana 300 amagremu ukuzwa imikhawulo lapho kumiswa uhlelo, futhi manje umntwana okungukuthi etholakalayo emhlabeni wonke umsindo. Uma uke hhayi owakhuluma kuye ngo, sekuyisikhathi ukuqala. Phela, njengoba ingane eba esibelethweni, incike onjani impahla uyinike. Ngu ngesonto lama-20, ophela ngokuphelele ukwakheka kobuchopho futhi, ngenxa yalokho, amangqamuzana yayo badinga kwento okufanele kusetshenzwe.
Yini ongayenza ukuze usize ukuthuthukisa yokuphila kwengane? Funda izinkondlo nezindaba, uhlabelele izihlabelelo, ngitsheleni, belunjani usuku lwakho, kaningi ngokwemvelo. Kusukela leli phuzu ungakwazi ukunikeza ingane yakho ukudlala nawe. Izingane ukufunda ngokushesha, entendeni umama ukotini ku esiswini kuzodala push emuva endaweni efanayo.
ngenyanga yesithupha: amasonto 21-24
Uma kuze kube manje ingane amanga, njengoba afuna ukuba yiyo, kodwa manje isisindo sakhe kuze kufinyelele 500 g, futhi ukuphakama - 27 cm ukuze ujike, unawomina ukwenza ezinye umzamo .. Neoplasms kwalesi sikhathi kungenziwa ngokuthi amashiya. Iphela nail kumiswa. Esikhathini amaqanda amantombazane kakade athuthukile ngokugcwele amaqanda, kusukela lapho-ke ngeke abazukulu bakho.
Ungakwazi ehlukahlukene umdlalo wakho - hhayi nje pat, kodwa futhi uwuhlikihle, pat bese ucindezela ngomunwe wakho noma ukuchitha into Fluffy. Nakani impendulo wengane. Zonke imiqondo eyisisekelo: ukukhanya - amnyama, abandayo - ukushisa, kakade atholakale kid. Uma uthatha ucezu ice nemvaba yamanzi afudumele ke, yanjalo kokuzisebenzisa esiswini, ungakwazi ukunikeza ingane yakho sezifundo zokuqala, etshela, nabanye izenzakalo ezahlukene, wahlangana kuleli zwe.
Ngenyanga yesikhombisa: amasonto 25-28
Baby kakhulu njengendoda. Isisindo sayo - 1 kg, futhi ukuphakama - 34 cm has a izinwele ekhanda lakho, eyelashes avele .. Sikhula futhi ithuthukisa izikhandle kakhudlwana ekufuneni, futhi ngcono izinzwa. Ekugcineni, ibhalansi izitho akhiwa, ngakho noma yini kwenza ingane esibelethweni, It is ezihlosiwe nalehlanganisile. Angaba ncela isithupha sakhe, bese nijabula, ukuhlola umzimba wakho kanye nezwe kancane aye waphetha.
Qaphela ukuthi kule nyanga ingane iqala ukuba ulahlekelwe ubuningi amangqamuzana obuchopho, ngakho inkolelo yokuthi umuntu wesifazane okhulelwe kumele ulala ukulala eziningi, ngokuyisisekelo okungalungile. Manje ingane muhle kakhulu ukuzwa futhi ukuhlukanisa imisindo, ngakho kuyasiza sishaywe umoya phandle, samenza waba nethuba lokujabulela ukuphila okunokuthula nemvelo. Google nengane yakho ku "Igama Lokho Tune", ukubeka ezihlukahlukene iculo, imisindo yemvelo, cela umbono wakhe. umfutho Ngokuvamile ezolile - lena "yebo", uchungechunge abukhali futhi okufutshane - ". kungekho" Mane ukhulume nabo, ukudlala ubaba ku "tic-tac-uzwane" ngesisu sakhe, nakuba nginikeza ilungelo "run" ingane.
Ithuluzi omkhulu umndeni ukuziqambela, ekukhuleni kwengane kuyindlela yokwelapha art lapho abazali gouache upende nge ibhulashi noma iminwe esiswini sikanina umama okhulelwe. Lokhu ethintekayo emizweni ezintsha, kanye kothando kwabazali.
Ngenyanga yesishiyagalombili: amasonto 29-32
Nalesi sikhathi sokukhula ngokomzimba esebenzayo. On indlela ingane eba esibelethweni ngalesi sikhathi kuncike kungaba ukuze usinde umshado nisebancane lokuzalwa ikani. ingane umzimba ifunda ukuzithiba lokulawula izinga lokushisa lomzimba wazo. Ekupheleni kwaleyo nkathi, uyobe ukufinyelela isisindo 1.7 kg kanye ukuphakama 39 cm. Yena ifunda push ichashaza, izindololwane, amadolo, yayicindezele odongeni kwesibeletho noma isithende entendeni. Ixhumeke ne neqiniso lokuthi wayeseholela sekuyisiminyaminya.
Yakho umntwana okungukuthi kakade kahle Ubona, ° ng, uma nesisu yokuthumela egqamile ukukhanya, ezinhle okuhlukanisa imini nobusuku. Ungakwazi ukwengeza umdlalo nge flashlight ngaphambi kokulala, kuyokunikeza eziningi nakho ezimnandi nobabili. Ukukhanya singashintshwa kusuka indawo ukuba ehlasela umzimba wonke, sibhekiswe ezahlukene izindawo lapho esiswini, bese ukuvala shaqa futhi ukulinda kuze kube umntwana iqale look for the "Sunbeams".
Nambithani izintandokazi sezivele eyakheke, ingane ikani cishe thinta amniotic kwamanzi, aqukethe ezingemnandi ajabulele, futhi, kunalokho, ngokulangazela ukugwinya, uma umama badla evamile futhi encomekayo ukudla. Yingakho ingane esibelethweni ngokuvamile hiccups. Lokhu kuwuphawu engenangozi, kodwa uma hiccups kuthathe amahora ambalwa, tshela udokotela wakho okuholela ekukhulelweni.
ngenyanga yesishiyagalolunye: amasonto 33-36
ingane Khanyisa ulungiselela yokuthi maduzane ukuphefumula bebodwa. Isisindo ingane phakathi nalesi sikhathi kuhluka 2 kuya ku-3 kg futhi ifinyelela ukuphakama 47 cm. Ingane yakho isilungile ngokuphelele kokuzalwa, kodwa iziphathimandla ngcono.
Izinsuku zokugcina ngaphambi kokuzalwa: amasonto 37-40
Kusukela amasonto 37, ukulethwa ungase uqale yiluphi usuku. Ingane ngalesi sikhathi okuxovekile, esiswini sowesifazane uwela. Kukhona umqondo ogcwele kubantu wokuthi amantombazane bazalwa maningi amathuba uma sebehlanganisa amasonto angu-38, kanti abafana - phezu 40, kodwa hhayi ukuqinisekisile wezibalo. Sekuyisikhathi ukuqoqa izinto esibhedlela.
Lesi sigaba ihlanganisa kuphela emabangeni amakhulu abambe zembula indlela ingane eba esibelethweni. Empeleni, le nqubo emangalisayo kakhulu futhi engaqondakali. Futhi umama kusenesikhathi ungagcina sikhathi kuyadingeka njengoba uthando okuningi nokunakwa.
Lapho esiswini kuqala ukukhula ngesikhathi sokukhulelwa (wesibili)? Isithombe ngu-sonto, omama yangempela
Umsebenzi kwabesifazane abakhulelwe
I Kufinyeta ngaphambi kokuzalwa - basuke bekhuluma owesifazane
Indlela ukuya uvikelekile Windows 7 XP Mode
Amageyimu weveli "Anna Karenina": izici zabalingiswa abakhulu
Robert Ludlum: Biography nemisebenzi
Amaphrotheni for girls ukuzuza kwemisipha iphilile ukuncipha